I-03 / 02 / 2020 | RayHaber | raillynews
Usuku: NgoFebhuwari 3, 2020
Sakhiwe nabatshalizimali e-Erciyes Tourism Investment Forum
Engqungqutheleni Yokutshalwa Kwezokuvakasha ehlelwe yi-TTYD e-Istanbul, kuchazwe amandla acebile kwezokuvakasha e-Erciyes nakulesi sifunda futhi nabatshalizimali bamenyelwa e-Erciyes. Ukuvakasha Zimali Association of Turkey (TTYD) futhi ngokusekelwa sikaMongameli Investment Office [Okuningi ...]
UPendik Kaynarca Tuzla Metro Line Ukwakhiwa Kwokuqala Kuqala Futhi Ngomkhosi
UMongameli we-BBB u-Ekrem İmamoğlu ubeka phambili ukutshala imali kamasipala njengoba ethembisile. Ngemuva komgwaqo ongaphansi kukaSultanbeyli no-Ataşehir, ukwakhiwa kukaMasipala wesithathu, "Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro", sekuqalile futhi. Imamoglu, Mecidiyekoy-Mahmutbey [Okuningi ...]
Ukuhamba nge-Gemlik Mass Manje Kunethezekile
Ngokunikela kukaMasipala waseBursa Metropolitan kanye neBurulaş, ama-microbus amasha angama-28 athathwe nguGüzel Gemlik Bus noMinibuscular Cooperative afakwa emkhosini. IMeya yeBursa Metropolitan u-Alinur Aktaş, ngakolunye uhlangothi [Okuningi ...]
I-Istanbulites Ikhetha Ukuhamba ngomgwaqo okuhamba ngokuphephile ebusuku
Isicelo sangaphansi ebusuku, esiqale ngo-Agasti 30, 2019, safinyelela abagibeli abayizigidi eziyi-6 1 abagibeli ezinyangeni eziyisithupha. Abahlali base-Istanbul bathi bakhetha ukuthi lo metro uhambe ngokuphepha ebusuku. Ubumbano kuMasipala we-Istanbul Metropolitan (IMM) [Okuningi ...]
Kuyini i-Electric yamanje, ilinganiswa kanjani?
Amandla kagesi afana kakhulu nomfudlana wamanzi, esikhundleni samamolekyuli amanzi ahamba phansi emfuleni, izinhlayiya ezikhokhiswayo ziwisa umgibeli phansi. Okwamanje kagesi, ijubane lokushaja eligeleza ebusweni [Okuningi ...]
Amaphesenti angama-65 e-Zigana Tunnel Construction Aqediwe
UNgqongqoshe Wezokuvakasha eTurhan İsmail Ustaoğlu, iPhini lika-AK Party Trabzon uSalih Cora, iMeya yaseTrabzon Metropolitan uMurat Zorluoğlu, Umqondisi Jikelele woMgwaqo omkhulu Abdulkadir Uraloğlu, uMongameli we-AK Party weSifundazwe uHaydar Revi, Ortahisar [Okuningi ...]
Abakwa-ESHOT Bazohlinzeka Zonke Izidingo Zikagesi ezivela elangeni
I-ESHOT, eyayithumele indawo yokuqala amandla kagesi elanga eminyakeni emibili nengxenye edlule, isakha eminye emithathu. Ngokukhishwa kwezikhungo ezintsha, i-ESHOT izohlangabezana nazo zonke izidingo zayo zikagesi ezivela kumapaneli elanga. Izmir Metropolitan Municipality ESHOT [Okuningi ...]
Isikhathi Sokuhamba se-Ankara Istanbul Sizoba imizuzu engama-30 nge-YHT entsha
Ungqongqoshe Turhan, TCDD Tasimacilik AS. Enkulumweni yakhe eMhlanganweni woku-1 wokuXhumanisa nokubonisana woMqondisi Jikelele, uthe le nkampani ingenye yezinhlangano ezidumile ezisungulwe muva nje. Ezomnotho, ezepolitiki, zenhlalo zezwe kanye [Okuningi ...]
I-Iyidere Logistics Center nePort kuzonikezwa ngo-2020
“I-Iyidere Logistics Center”, ebize iRize isikhathi eside, isetshenziswa ngo-2020. Iphini lika-AK Party Rize u-Muhammed Avcı uthe, “Njengoba umfundisi wethu echaza; Iyidere Logistics isikhungo kanye nembobo kulo nyaka [Okuningi ...]
I-Divriği Nuri Demirağ MYO Iphrojekthi Yokuthuthukiswa Kwengqalasizinda Yezemfundo Yamukelwe
I-Sivri Cumhuriyet University Divriği Nuri Demirağ Vocational School “Divriği Nuri Demirağ Vocational School ngenhloso yokuthuthukisa ingqalasizinda ebonakalayo nezinsizakusebenza zabantu ezifana nesigaba, elebhu, indawo yokusebenzela, imishini yomshini nezinto zokufundisa. [Okuningi ...]
Kwenzekani kuphrojekthi yokuthunga iNata Vega Metro Project?
Ngenkathi iMeya ye-Ankara Metropolitan uMansur Yavaş enza izitatimende ezibalulekile maqondana nale-ajenda, wanikeza imininingwane nge-Ankapark ne-Dikimevi Nata Vega Metro Project, okwakuyindaba yokufuna ukwazi. I-Ankara Metropolitan Mayor Mansur [Okuningi ...]
Izindawo Zesitimela e-Adapazarı City Center Zimenyezelwe
Isigaba esiphakathi kokudlula kwesitimela i-Adapazarı-Istanbul eBeşköprü naseDonatım kwathiwa njengesiza sokuqala se-Archaeological Site. Ngokokwaziswa okutholakele, ujantshi kanye nesakhiwo esiteshini ngaphakathi kweRegional Board of Protection of Cultural Heritage yaseKocaeli, ujantshi [Okuningi ...]
Kuvulwe Iwebhusayithi yeKanal Istanbul
I-Presidency of Communication yethule iwebhusayithi yayo, "Kanalistanbul.gov.tr", equkethe imininingwane yephrojekthi yeKanal Istanbul nezimpendulo zayo yonke imibuzo. Ukumemezela ukuthi iwebhusayithi ebizwa ngegama elithi "Kanalistanbul.gov.tr" elungiswe yiCommunication Directorate ivulwe ku-Twitter [Okuningi ...]